बिर्तामोडको हिरासतमा एक नाबालकको मृत्यु, परिवारलाई थाह नदिई शव पोस्टमार्टम ! « Nepal Bahas
बिर्तामोडको हिरासतमा एक नाबालकको मृत्यु, परिवारलाई थाह नदिई शव पोस्टमार्टम !
प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०७:११
बिर्तामोड । इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडको हिरासतमा एक नाबालकको मृत्यु भएको छ । मेचीनगर–६ का १५ वर्षीय किरण कार्कीडोली दर्जीको मृत्यु भएको हो ।